I-6 yabahleli bePDF abalungileyo Ubuntu | Ubunlog
I-6 yabahleli bePDF abalungileyo Ubuntu
Khangela kunye ukufumana ulwazi ngeefayile ngefomathi yePDF sele kuyinto eqhelekileyo, ezingafaniyo kwiminyaka embalwa eyadlulayo zazinqabile. OKANYEEsinye isoftware eyaziwayo yokufunda nokuhlela ezi yiAdobe Acrobat.
Nangona bebaninzi abakhetha ukusetyenziswa koku, yiyo loo nto Ngeli xesha siza kwabelana nawe ngabanye babahleli bePDF abaziwayo Oko akunakunceda kuphela ukuba ukwazi ukuvula umxholo weefayile zakho zePDF kodwa uya kuba nakho ukuzihlela ngoncedo lwezi.
2 Ubaleko lwePDF
3 Umhleli wePDj sejda
6 IQoppa PDF Studio
Okular ngumbonisi ovulekileyo wombhali woxwebhu lomthombo ovulekileyo Apho ungajonga khona amaxwebhu kwaye uhlele iifayile ezisisiseko zePDF.
Emva kokuvula ifayile yePDF kwi I-Okular, unokukopa ngokulula icandelo lesicatshulwa ngokukhetha kwibhodi eqhotyoshwayo, okanye ungayigcina njengomfanekiso.
Kwizixhobo zoPhononongo lweTab, uza kufumana ukhetho njengamanqaku asemgceni, amanqaku okuvela, ukuzoba umgca, isandla sasimahla, isitampu, ukuqaqambisa kunye nezinye izinto.
Okular inokusingatha ngokulula imisebenzi yakho esisiseko yokuhlela iPDF, kodwa ukuhlela okuphambili, akuncedi kakhulu.
Ukuphunyuka kwePDF Sisicelo esisiso kwaye asifuni naluphi na ukhuphelo, Bangasisebenzisa esi sixhobo ngokuthe ngqo kwi-intanethi nakwesiphi na isikhangeli sewebhu.
Es I-100% isimahla ukuba i-PDF ayidluli kumaphepha ayi-100 okanye i-10 MB ngobukhulu.
Inoku kulandelayo iimpawu:
Isebenza kwi-intanethi kwisikhangeli sakho sewebhu
Zininzi izixhobo ezibonelelweyo
Ikuvumela ukuba ungeze isicatshulwa sakho kunye nemifanekiso
Ungasusa kwaye ungeze amaphepha kwiPDF
Umhleli wePDj sejda
Sejda Umhleli wePDF, a Umahluko kwabahleli abakhankanywe ngasentla inenqaku elongezelelekileyo elinokuthi ivumela ukuhlelwa kokubhaliweyo esele kukho kwi-PDF ngaphandle kokongeza i-watermark . Uninzi lwabahleli luhlela kuphela isicatshulwa osongeza ngokwakho, okanye bayakuxhasa ukuhlela okubhaliweyo kodwa emva koko baphosa ii-watermark kuyo yonke indawo.
Kwakhona, esi sixhobo inokusebenza ngokupheleleyo kwisikhangeli sakho sewebhu, ke inokhetho olongezelelekileyo lokukwazi ukuyisebenzisa ngaphandle kokukhuphela nayiphi na inkqubo. Nangona kunjalo, unokufumana ingxelo yedesktop ukuba ukhetha njalo.
Ewe kulula ukuyisebenzisa xa ujonga uxwebhu kwaye iza yakhiwe kwindawo yedesktop yeGnome. SIimpawu zayo zibandakanya isalathiso samaxwebhu kunye nokuprinta, ukujonga uxwebhu ngokufihlakeleyo, izixhobo zokukhangela kunye nokunye okuninzi.
Kwi unokujonga iifayile kwiifomathi zePDF, zePostScript kunye neze-DjVu. Injongo ka-Evince kukubuyisela endaweni yesicelo esinye, ababukeli abaninzi bamaxwebhu abakhona kwi-GNOME, njenge-GGV, GPdf, kunye ne-xpdf.
Kubhaliwe ikakhulu kulwimi lwenkqubo C, kunye nenxalenye encinci ebhalwe kwi-C ++, eyikhowudi yokunxibelelana nesoftware yePoppler.
Inkscape yiyo Inkqubo yemizobo yevektha enomdlas, iigrafiki ezininzi eziyilwe ngobuchule kwihlabathi liphela zisebenzisa le software rhoqo.
Unokuhlela kwaye ungenise iifayile zakho zePDF. Ke inokusebenza kakuhle njengomhleli weLinux PDF.
Inye kuphela into ehlupha abanye abantu yile Inkscape ayisebenzi njengabanye abahleli bamaxwebhu, abaxhasa amaphepha amaninzi njengeLibreOffice Draw kunye neLizwi. Isoftware ingenisa iphepha elinye ngexesha.
IQoppa PDF Studio
IQoppa PDF Studio ngumhleli wePDF wentengiso obonelelwa yisoftware yeqoppa kwaye inayo yonke imisebenzi yokuhlela esisiseko. Unokwenza ngokulula, uhlele kwaye uphonononge ifayile yePDF.
Ungahlela ngokulula umxholo wombhalo kunye neepropathi zawo, into yendlela kunye neemilo, ukuphinda wenze ubungakanani kwakhona kwaye uhambise imifanekiso, kunye nokwandisa iPDF yakho ukunciphisa ubungakanani befayile.
Yongeza iibhokisi zeteksti, izichasiselo ezisimahla, iibhokisi zombhalo, izixhumanisi kunye nokunye.
Unokuncamathisela ifayile yakho kuxwebhu lwePDF.
Skena amaxwebhu ngqo kwiPDF kwaye ukhuphe, ucime okanye ufake iphepha.
Faka iinyawo, iintloko kunye neewermark
Ungaseta ipaswedi kuxwebhu lwePDF
Iimpawu zenkxaso njengokukhangela okubhaliweyo thelekisa iifayile zePDF ecaleni, umbono wegridi kunye nomlawuli.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » software » I-6 yabahleli bePDF abalungileyo Ubuntu
IShalem Dior Juz sitsho
Ulahleko lwe-Master PDF Editor yeLinux, intle kakhulu.
Phendula kwi-Shalem Dior Juz
Uninzi lwababukeli be-pdf, hayi abahleli.
Umhleli olungileyo we-pdf uya kuba ngu "Master PDF EDITOR" https://code-industry.net/free-pdf-editor/
Kuhleli kucacisiwe ukuba i-Sejda ikuvumela kuphela ukuba wenze i-3 editions ngosuku kuxwebhu olunye, ukuba ufuna ukwenza ushicilelo lwesine kuya kufuneka uhlawule iidola ezisi-8 ukuzisebenzisela iveki okanye iidola ezingama-63 ukuzisebenzisa unyaka . KwiLatin America ngokubanzi nase-Argentina ngokukodwa, iidola ezingama-63 yimali eninzi, kunjalo. I-40% yomvuzo osisiseko.
Kwelinye icala i-Master PDF EDITOR ayisiyo "i-pdf editor" yasimahla, njengoko ipapashiwe, kodwa isimahla kwimisebenzi yayo esisiseko, enokuthi yenziwe ngokuDweba kwiLibreoffice umzekelo, ukusebenza kwayo kwe-PDF EDITOR kuyahlawulwa kwaye Iikhowudi zomthombo wokudibanisa, ukuguqula, njl. azifumaneki ngokuvulekileyo, oko kukuthi, ayisiSimahla, yintengiso elahlekisayo.
IHermme S. sitsho
Molo mhlobo wam, kwaye ucebisa eyiphi.
Phendula uHerme S.